Wasaaradda Arrimaha gudaha oo xoogga saareysa hirgelinta Golaha Deegaanka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda Arrimaha gudaha oo xoogga saareysa hirgelinta Golaha Deegaanka
Wasaaradda Arrimaha gudaha oo xoogga saareysa hirgelinta Golaha Deegaanka
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya oo furtay shir looga hadlayey dhisidda Golaha Deegaanka ayna ka qeyb galeen Wasiirada Arrimaha Gudaha Maamul Goboleedyada Dalka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Kullanka oo aha mid Wadatashi ah ayaa waxaa looga hadlay dhismaha Golaha Deegaanka ee dhamaan Degmooyinka Soomaaliya, waxaana ka soo qeyb galay dhamaan Wasiirada Arrimaha Gudaha ee Dowladda Goboleedyada Dalka, Maamulka Gobolka Banaadir iyo Hey’ad ka shaqeeysa Arrimaha Horumarinta Deegaanka.
Wasiirada Arrimaha Gudaha ee Maamul Goboleedyada dalka ayaa sheegay in intooda badaan meel wanaagsan uu marayo dhismaha Golaha Deegaanka iyo dhameystirka Sharciga Golaha Deegaanka, waxaana barnaamijkan soo agaasintay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dib u heshiisiinta Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Mudane Cabdullaahi Maxamuud Xasan ayaa sheegay in Wasaaraddu ay xoogga saareyso sidii loo dhameystiri lahaa hanaanka loo marayo dhismaha Golaha Deegaanka.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Juxa ayaa waxaa uu tilmaamay in deegaanadda qaar aysan suurto gal aheyn in laga sameeyo Gole Deegaan xaalad Amni awgeed, balse Deeganada kale sida ugu dhaqsiyah badan looga hirgelin doono.
Wasiir Juxa waxaa kale oo uu sheegay in looga baahan yahay Maamul Goboleedyada inay qeyb ka qaataan meel marinta sharciga Golaha Deegaanka si-dhaqso loo helo Gole Deegaan oo dhameystiran.
Golaha Deegaanka waxaa sameystay oo kaliya dhamaan Degmada Xudur ee Gobolka Bakool, kaddib doorasho ay galeen, waxaana ay ka kooban yihiin 27 Qof.
Previous articleRa’iisul Wasaare Khayre oo Shir-Guddoomiyey Shirka Amniga oo beesha caalamka ay goob joog ahaayeen
Next articleXildhibaannada Golaha Shacabka oo ansixiyay hindise sharciyeedka Biyaha